ကေအင်ယူ ခေါင်းဆောင်ကို ၀န်ကြီးတွေ တွေ့ဆုံအားပေး
ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ အဆုပ်ရောဂါနဲ့ တက်ရောက်ကုသနေတဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖဒိုစောဒေးဗစ်ထောနဲ့ မိသားစုကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဝန်ကြီးသုံးဦး ဒီ ကနေ့ ညနေပိုင်းက သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
စက်သုံးဆီဆိုင်များရှိ လီတာပန့်များ၏ တစ်ဂါလန်အမှန်ဆီထွက်နှုန်းအားကို ၄ ဒသမ ၅၄၆လီတာ အဖြစ် စံသတ်မှတ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ရောင်းချရန် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ ရှိ လီတာပန့်များ၏ တစ်ဂါလန် အမှန်ဆီထွက်နှုန်းအား ကို ၄ ဒသမ ၅၄၆ လီတာအဖြစ်စံနှုန်းသတ်မှတ်ပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီသတ်မှတ်ရောင်းချရန်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ အောက်တို ဘာ လ ၁၁ရက် နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 22:17 No comments:
ဟံသာဝတီ လေဆိပ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အပါအဝင် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများ၌ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေး ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဂျာမနီနိုင်ငံက ဆန္ဒရှိနေ
ဂျာမနီနိုင်ငံသည် ဟံသာဝတီ လေဆိပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအပါအ၀င် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများအတွက် နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း ဂျာမနီနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E.Dr.Ka-rl Brauner က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကလေးတွင် ဘင်္ဂါလီ(၁၆)ဦး ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့တွင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်လမ်းများမှတရား မဝင် ခိုးဝင် လာသော ဘင်္ဂါ လီ လူမျိုး(၁၆)ဦးအား အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း ကေ လးမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ အတည်ပြု ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
စိန်နှင့် ခဲနက် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကမ္ဘာမြေထက် နှစ်ဆ ပိုကြီးသော ဂြိုဟ်ကြီး တစ်လုံး တွေ့ရှိ
ကမ္ဘာကြီး၏ အရွယ်အစားထက် နှစ်ဆခန့် ပိုမိုကြီးမားပြီး အလင်းနှစ် ၄ဝ ခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိ သည့် စိန်နှင့် ခဲနက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဂြိုဟ်ကြီး တစ်လုံးကို နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်များက ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အင်တာနက် သတင်း တစ်ရပ်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။
﻿မြန်မာ့ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်ဘီလျံကျော်အနက် အများစုကို နောက်နှစ်မှ စတင်ပြီး ဂျပန်လျှော်ပစ်မည်
ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာ့ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်ဘီလျံကျော်အနက် အများစု ကို နောက်နှ စ် ဇန်န ၀ါရီလတွင် စတင်လျော်ပစ်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှ င့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချေးငွေသစ် များ ပြန်လည်စတင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးကိုရီကီဂျိုဂျီမာကအောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 21:59 No comments:
ဒီမိုကရေစီစနစ်အား အများက သာပိုင်ကြောင်း ဦးရွှေမန်းဆို
ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် အများကြိုက်ကြသော စနစ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ၊ အများက သာပိုင်ခြင်းေ ကြာင်း ပြည်ေ ထာင် စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဌ ဖြစ်သည့်သူရဦးရွှေမန်းကယနေ့ကျင်းပေ သာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဗဟိုညီလာခံတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံး ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းချက်
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံးဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဟန်းသံဃာများ အပါအဝင် ပြည်သူအများက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂။ နိုင်ငံအချင်းချင်း(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှန်ရေးထိုးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 17:59 No comments:
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို အရေးယူနိုင်ရန်ရာဇသတ်ကြီး ခေါ် ပြစ်မှုဥပဒေ အပြင်၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင် ရန် ပြဋ္ဌာ န်းေ သာ အထူး ဥပဒေများပါဝင်ကြပါသည်။
နိုင်ငံတော်က ပြဋ္ဌာန်းထားသော ပြစ်မှုဥပဒေများကို မည်သူမဆို ကျူးလွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပုဒ်မတို့အရ အရေးယူ ကြရပါသည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 15:40 No comments:
ဂျပန်ပြည်တွင်းရှိ ကားကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၀၀ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် JUMVEAအဖွဲ့အစည်းမှကားနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတင်သွင်းမည်
ဂျပန်ပြည်တွင်းရှိ ကားကုမ္မဏီပေါင်း ၂၀၀ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ကားနှင့် ဆပ်စပ်ပစ္စည်း များ ကို တင်သွင်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အောက်တို ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့က ယုဇန ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ေ သာ ဂျပန် နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကားလုပ် ငန်းရှင်များ စိတ်ဝင်စားသူများ လွတ်လပ် စွာ တွေ့ဆုံေ ဆွးနွေးပွဲ တွင် JUMVEA အဖွဲ့မှ မန်းနေ ဂျင်းဒါရိုက်တာMr.SATO က ပြောသည်။
အမေရိကန် ကိုယ်ခံပညာပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာပြည်မှ အောင်လက ပြိုင်ဘက်အား အလဲထိုး
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဒီလာဝယ်ပြည်နယ်၌ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကျင်းပသည့် ကိုယ်ခံ ပညာေ ပါင်းစုံတိုက်ခိုက်ရေး (Mixed Martial Arts) ပြိုင်ပွဲ၊ တစ်နည်းအား ဖြင့် Cage Fury Fighting Championship (CFFC) ဟုခေါ်သော ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာပြည်ဖွား ကချင်တိုင်းရင်း သား အောင်လ အင်ဆန်းက အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မှ ပြိုင်ဘက်အား လျင်မြန်စွာ အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့သည်။
KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်များ။ လာမည့် ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့အတွင်း လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြဿနာ များကို ဆွေးနွေး ညှိ နှိုင်းမူများမှတဆင့် ပြေလည်မှု ရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဌရာထူး ဦးရွှေမန်း ယူဖွယ်ရှိ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုတက်ရေးပါတီတွင် ဥက္ကဌ ရာထူးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးချယ်တော့ မည်ဖြစ်ပြီး ဥက္ကဌ နေရာကို သူရဦးရွှေမန်းယူနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ယင်းပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး ကပြောကြားသည်။
"ထမင်းစားပြီး ချက်ချင်းရေချိုးရင် ရေဖျဉ်းစွဲ တတ်တယ်"တဲ့။ စာရှုသူအားလုံး မကြာခဏ ကြားဖူး နေကျစ ကားဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာမှ မသိနားမလည်တဲ့ ကလေးဘ၀ကတည်းက ကြားေ န ကျစကားမို့လို့ နားထဲစွဲနေပြီး မှန်သလိုလိုတောင် ထင်လာရတဲ့အထိ လူအတော်များများ ယုံနေကြ ပါ ပြီ။ ဒါက နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အလှမ်းဝေးခဲ့တဲ့ လူကြီး သူမတွေ မပြောနဲ့၊ ယနေ့ခေတ် (ဆေးလောကထဲက မဟုတ်တဲ့) ပညာတတ်အချို့ကတောင် အမှားအမှန် ခွဲမသိဘဲ အယူသည်း ရှောင်ကြဉ်နေကြတုန်းပဲ။ ဒီ တော့ မေးစရာစကား ရှိလာပါတယ်။
"ထမင်းစားပြီး ချက်ချင်းရေချိုးရင် ရေဖျဉ်းတကယ်စွဲတာလား"
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲပြုတော့မည်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွင်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနှင့် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ အပြောင်း အလဲပြု လုပ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ကျင်းပလျက်ရှိသော ပထမအကြိမ်ပါတီညီလာခံမှ သိရှိရသည်။
နေပြည်တော်တွင် ယနေ့စတင်ကျင်းပလျက်ရှိသော ပထမအကြိမ် ပါတီညီလာခံတွင် တစ်နိုင်ငံ လုံးရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင၊် တိုင်းရင်းသားပါတီဝင်ပေါင်း အားလုံးစုစုပေါင်း (၉၁၃) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ကြ သည်။
" O.I.C. ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ ''
၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ဗမာအဓိကရုဏ်းဖန်တီးပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အသက်ရှည်ပါစေလို့ ဆန္ဒဖော် ထုတ်ခဲ့သလိုအခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာလည်း ရခိုင်အဓိက ရုဏ်းတစ်ခု နည်းတူဖန်တီးပြီး သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အသက်ရှည်ပါစေလို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြပြန်တယ်။
တရုတ်ဗမာအရေးအခင်းတုန်းက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရုတ်အသင်းမရှိခဲ့။ အခု ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ O.I.C. အဖွဲ့ကြီး ရှိနေတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ကျားမြီးဆွဲမိပြီ။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 12:28 No comments:
ပင်လယ်ပြင် အလယ်က မြို့ 
ပင်လယ်ပြင်အလယ်က မြို့ ဆိုတာ တကယ်ရှိပါ တယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်း ပင်လယ်ရေပိုင်နက်က ဖြစ်ပြီး Mont Saint Michel အမည်ရ မြို့ ငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သက္ကရာဇ် ၇၀၉ ခုနှစ် ကတည်းက ရှိတာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်းငယ်လေးကို မြို့ လိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နစက-BGB တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ယခုလတွင် သုံးကြိမ်မြောက်ရှိပြီ
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအကြား ပုံမှန်ချစ်ကြည်ရေးနှင့် နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက် ယခုလအတွင်း သုံးကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
AZG အရာရှိများ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် မောင်တောတွင် တွေ့ဆုံ
AZG (MSF- Holland) အဖွဲ့မှ တာဝန်ခံများသည် ယမန်နေ့က မောင်တောမြို့တွင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ဒေသခံများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု သိရသည်
အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကို ရည်ရွယ်တဲ့ အစ္စရေး အမေရိကန် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု
အီရန်နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသို့ ဒုံးကျည်ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာပါက ပူးပေါင်းစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် အတွက် အမေရိ ကန်နှင့် အစ္စရေး နိုင်ငံတို့သည် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး (Air Pelence) ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကို အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်မှစ၍ ရက်သတ်္တ သုံးပတ်ကြာလေ့ကျင့် မည်။
ကောလင်းမြို့နယ် အနောက်ခြမ်းဒေသတွင် မူးယစ် ဆေးဝါး ရောင်းချ၊ သုံးစွဲသူများပြားလာသည့်အတွက်ဒေသခံတောင်သူများ စိုးရိမ်နေရ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းမြို့နယ် အနောက်ခြမ်း ဒေသကျေးရွာအချို့တွင် မူးယစ် ဆေးဝါးရောင်း ချသူ၊ သုံးစွဲသူများ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးနေသော်လည်း လျော့ပါး သွားခြင်းမရှိဘဲ မူးယစ်ဆေး ၀ါး သုံးစွဲသူများပိုမိုများပြားလာသဖြင့် လယ်ယာသုံးကျွဲနွား များမကြာခဏ ပျောက်ဆုံး မှုရှိ လာေ သာ ကြောင့် ဒေသခံတောင်သူများ စိုးရိမ်နေရကြောင်းဒေသခံ တောင် သူများ၏ ပြောပြချက် အရ သိရှိရ သည်။
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေးတွင် အမျိုးသမီးများ အရေးပါကြောင်း ပညာရှင်များ ပြောကြား
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး အတွက် ကြိုးပမ်းရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများမှာ အရေး ပါ ကြောင်း နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင် များ ပြောကြားကြောင်း နေပြည်တော် တွင်အောက် တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့က ကျင်းပသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး နေ့ အထိမ်း အမှတ် အခမ်းအနား တက်ရောက် လာသူများက ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းမှ နှစ်စဉ် ကျင်းပသော အထက်ပါ အခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ သည်မှာ သုံးကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ၏ အခန်း ကဏ္ဍကို အဓိကထား ဆွေးနွေး ပြောကြားကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့တွင် လူထုဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့တွင် ၁၆.၁၀.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့အတွက် အစိုးရဆီ တွင် လျှောက်လွှာ တင်ထားကြောင်း ကိုဦးဆောင်လူငယ်တယေက်မှ RSV ကို ပြောပြပါသည်။
၄င်းတို့ တောင်းဆိုမည့် တောင်းဆိုချက် (၆) ချက်တင်ထားကြောင့် (၁) OIC ရုံးအလိုမရှိ (၂) သမ္မတကြီးက ကုလသမဂ္ဂဖြင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားချက်ကို အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ရန် (၃) ရခိုင်သားများ လုံခြုံရေးအတွက် ဘင်္ဂလီကုလားများကို ရခိုင်များနှင့် ဝေးရာသို့ ပို့ထားရန် (၄) ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေကို အတည်ပြုပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် (၅) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချရန် (၆) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူနည်းစုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို ကာကွယ်ပေးရန်တို့ ကို တောင်းဆိုသွားမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
မြန်မာ (၃) ဦး ယာဘာဆေးပြား ၄၀၀၈၈ နှင့် အတူ နယ်စပ်တွင် အဖမ်းခံရ
ယာဘာဆေးပြား ၄၀၀၈၈ နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံ (၃) ဦးကို နယ်စပ်တွင် စနေနေ့နံနက်က ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း ဘင်္ဂလာ တာဝန်ရှိသူများပြောသည်။
သူတို့သည် အဆိုပါ ယာဘား ဆေးပြားများကို ဘုတ်တစ်စီးဖြင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ဘက်သို့ တင်သွင်းလာစဉ် နတ်မြစ်အတွင်း ဖမ်းမိခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ လျို့ဝှက် သတင်းအရ တက်ကနက်မြို့နယ် နာဆီယာ ပါရာ အနီးက နတ်မြစ်အတွင်း ဘုတ် တစ်စီးပေါ်ကို တက်ရောက် ရှာဖွေစဉ်မှာ ယာဘားဆေပြား ၄၀၀၈၈ နဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးမိပါတယ်” ဟု တက်ကနက် အခြေစိုက် ဘီဂျီဘီ တပ်ရပ် အမှတ် (၄၂) မှ ဗိုလ်မှူး အမ်းဒီ ဆိုင်ဖူးလ် ရာဟမန်က ပြောသည်။
ဟံသာဝတီယာဉ် ရောင်းဝယ်ရေး စခန်းဝင်း အတွင်းရှိ ညအိပ်ခွန် ပေးဆောင်ခြင်း မရှိပဲ ညအိပ် ရပ်နား ထားသော ယာဉ်များအား သဘောင်္ဆေးသုတ် မှတ်သား၍ ရုံးသို့ တင်ပြပြီး အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ယာဉ်စခန်း၏ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များ အရ သိရသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အထွေထွေညီလာခံသို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်
ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပနေသော ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပထမအကြိမ် အေ ထွထွေ ညီလာခံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒုသမ္မတနှစ်ဦးတို့ တက်ေ ရာက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟက်ကာများက တိုက်ခိုက် နိုင်မည့် Google ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက် အား ဖော်ထုတ် နိုင်သူ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်လေး ဒုတိယ အကြိမ် ဆုချီးမြှင့်ခံရ
အင်္ဂလန် အောက်တိုဘာ ၁၂
ပင်ကီပိုင်း အမည်ဖြင့် အွန်လိုင်း သုံးစွဲသူ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်လေး တစ်ဦးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း တွင် လူသုံးများသော Google ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်း ချက်များကို ဖော်ထုတ် နိုင်သဖြင့် ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံ၍ ဆုချီးမြှင့် ခံခဲ့ရကြောင်း သိရ သည်။
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းရဲ့ အဖွဲ့ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်လေ့လာ
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ Jimmy Carter တည်ထောင်ထားတဲ့ The Carter Center က မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်မှုတွေကို ကူညီနိုင် မယ့် နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ The Carter Center အဖွဲ့ရဲ့ အကြံပေးအရာရှိ Mrs. Sarah Levit- Shore နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် တို့ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ မနက်က တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ Mrs. Sarah ရဲ့ ပြောဆို ချက်တွေကို ကိုဂျင်မီက RFA ကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ ရှိနေသည့် ဆယ်ကျော်သက် ပညာရေး လှုပ်ရှား သူ မိန်းကလေး ကို တာလီဘန် က ထပ်မံ သတ်ဖြတ် အုံးမည် ဟု ခြိမ်းခြောက်
အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ၏ ပြရုပ် သဖွယ် ဒေသတွင်း ပြုမူနေသော ကြောင့် ပစ်သတ်ရသည်
ဟု တာလီဘန် အဖွဲ့က ပြောကြားထားသည့် အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ် ရှိ ပညာရေး အခွင့် အရေး
လှုပ်ရှား သူ ပါကစ္စတန် အမျိုး သမီး ငယ် မာလလာ ယိုဆာဇီ ကို ထပ်မံ လုပ်ကြံ သတ် ဖြတ် ရန်
ပါကစ္စတန် အခြေစိုက် တာလီဘန် အဖွဲ့က သတ် ဖြတ် ရန် ထပ်မံ ခြိမ်းခြောက် ထား သည် ဟု
နယူးယောက် တိုင်း သတင်းစာ ၏ အင်တာနက် စာ မျက် နှာ တွင် ဖော်ပြထား သည်။
ကောလာဟလနှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ တာဝန်
ပြီးခဲ့သော ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သော ကောလာဟလ တစ်ရပ်ကြောင့် တစ်နိုင်ငံ လုံးရှိ အဆိုပါ ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေထုတ်သူများနှင့် ပြည့်နှက် သွားခဲ့ပါသည်။ ကုန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကလည်း အဆိုပါ ဘဏ်ခွဲနှင့် ပတ်သက်သော ကောလာဟလ တစ်ခု ထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ သည်။ မြန် မာနိုင်ငံတွင် ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်လာတိုင်း ကောလာဟလ အပေါ် ပြည်သူလူထုက တုန့်ပြန်ပုံ မှာ နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိပါသည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ ကောလာဟလ သတင်းကို ကိုယ်တိုင် ယုံကြည် သကဲ့ သို့ဖြစ်ပြီး ဆက်လက် ဖြန့်ဝေကာ တုန့်ပြန်ခြင်း နှင့် ဒုတိယ တစ်မျိုးမှာ ကောလာဟလကို သံသယ စိတ်ဖြင့် ဆင်ခြင် သုံးသပ် တုန့်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စက်သုံးဆီဆိုင်များရှိ လီတာပန့်များ၏ တစ်ဂါလန်အမှန်ဆ...
စိန်နှင့် ခဲနက် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကမ္ဘာမြေထ...
﻿မြန်မာ့ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်ဘီလျံကျော်အနက...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံး ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စနှင့်စပ...
ဂျပန်ပြည်တွင်းရှိ ကားကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၀၀ ဖြင့်ဖွဲ့စည်...
အမေရိကန် ကိုယ်ခံပညာပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာပြ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲပြ...
နစက-BGB တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ယခုလတွင် သုံးကြိမ်မြောက...
AZG အရာရှိများ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် မောင်ေ...
အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကို ရည်ရွယ်တဲ့ အစ္စရေး အမေရိကန် ပူ...
ကောလင်းမြို့နယ် အနောက်ခြမ်းဒေသတွင် မူးယစ် ဆေးဝါးေ...
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေးတွင် အမျိုးသမီးများ အရေ...
မြန်မာ (၃) ဦး ယာဘာဆေးပြား ၄၀၀၈၈ နှင့် အတူ နယ်စပ်...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အထွေထွေညီလာခံသို့ သမ္မတဦးသိန်းစ...
ဟက်ကာများက တိုက်ခိုက် နိုင်မည့် Google ဝက်ဘ်ဆိုက်၏...
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ ရှိနေသည့် ဆယ်ကျော်သက် ပညာရေ...